Aragtidii Marxuum Cigaal Ee Qalalaasaha Soomaaliya!Qoraa Boobe Yuusuf. | Berberatoday.com
Aragtidii Marxuum Cigaal Ee Qalalaasaha Soomaaliya!Qoraa Boobe Yuusuf.
May 8, 2022 - Written by admin
(1929kii – 2002dii)
Xuska labaatan guurada geeridii Cigaal.
Qormadan waxa aan qoray 3/5/2002dii.
“Damashii aad ogaydiyo,
Dhirtii baa digriyeysa,
Nin kastaa ha dumaalee,
Madaxweyne la doortana,
Adigaa ugu da‘ weyn!“
Timacadde, 1968, Hargeysa.
Waa Qormo aan xus iyo baroor-diiqba uga dhigayo Maxamed Xaaji Ibraahin Cigaal, Madaxweynihii 2aad ee Jamhuuriyadda Somaliland.
Maalmo ka hor ayaa la soo gebagebeeyay aaskii, baroor-diiqdii iyo tacsidii Madaxweynihii hore ee Somaliland, Maxamed Xaaji Ibraahin Cigaal oo si lama filaan ah 3/5/2002dii ugu geeriyooday cisbitaal ku yaal magaalada Pretoria ee dalka South Africa. Marxuum Cigaal 6/5/2002dii ayaa si aad u sarreysa oo heer Qaran ah loogu aasay magaalada Berbera iyada oo la raacayo dardaarankiisii ahaa in aabbihii lagu ag aaso. Naxariistii Janno Alla ha siiyo, innagana dhammaanteen samir iyo iimaan ha inaga siiyo. Dhammaanteen marka aan leeyahay waxa aan uga jeedaa gaar ahaan Somaliland, guud ahaanna dadka Soomaaliyeed meel ay joogaanba. Waayo? Cigaal ma ahayn oo keliya hoggaamiyaha Somaliland bal se sida ka muuqatay tacsidiisii iyo baroor-diiqdiiba wuxu ahaa hoggaamiye Soomaaliyeed. Geeridii Cigaal iyada oo naxdinteeda lahayd, haddana waxaanu shaki ku jirin in ay milge iyo maamuus aan hore loo ogeyn u yeelatay Cigaal iyo shacbiga Somalilandba. Gude iyo dibadba waxa ka curtay dareen ididiilo leh oo dadkii isu soo dhaweeyay.
Ma hawl yara sida Cigaal wax looga qoraa. Haddii aad damacdo in aad Cigaal wax ka qorto waa in aad u badheedhaa konton sannadood iyo waxyaabihii ka dhacayay saaxadda siyaasadeed ee Soomaaliyeed guud ahaan, gaar ahaanna ta Somaliland. Intaas oo keliya ma aha e’, waa in aad u tafo-xaydataa wax-ka-qoridda shakhsiyaddii ballaadhnayd ee Cigaal oo mar walba ku lammaanayd. Waa hawl mudan baadhis iyo xog-urursi qoto dheer. Anna maanta taa uma soo ambo-bixin.
Waxa aan jeclahay maqaalkan in aan si sar-ka-xaadis ah wax uga taataabto aragtidii Cigaal ee ku wajahnayd Qalalaasha Soomaaliya. Maqaalkan waxa aan baroor-diiq, xus iyo maamuusba uga dhigayaa Maxamed Xaaji Ibraahin Cigaal oo suulkiisii iyo saxeexiisiiba kaga tegay saaxadda siyaasadeed ee Soomaaliyeed. Maqaalkan, qaybtiisa danbe waxa kale oo aan si guud-mar ah ugu qiimayn doonaa sidii Soomaaliya, gaar ahaan Muqdisho, loogaga baroor-diiqay geeridii Cigaal. Waxa aan ku yar hakan doonaa dhacdadii Hotel Shaamow oo Muqdisho ku yaal, halkaas oo 8/5/2002da tacsi loogu sameeyay geeridii Maxamed Xaaji Ibraahin Cigaal.
Cigaal, naxariistii Janno Alle ha siiyo e’ isku da’ ma aanu ahayn. Maqal ka sokow waxa aan bartay oo gacan-qaadkiisa iigu horreysay 19kii Meey 1991kii. Buurta Sheekh ayaanu gelin danbe laba Land-cruiser oo aanu kala wadannay isu joojinnay. Anigu xagga Berbera ayaan ka imid, is-na xagga Burco ayuu ka yimid oo uu ka socday Kal-fadhigii 2aad ee Caadiga ahaa ee Golaha Dhexe ee SNM oo lagu go’aansaday la-soo-noqoshadii madaxbannaanidii Somaliland iyada oo dalka lagu celiyay xaaladdii sharciyeed ee 26kii Juun 1960kii. Galabtaa isaga, dirawalkii baabuurka u waday iyo Ciise Curaagte ayay ahaayeen. Labadayaduba baabuurtii ayaanu ka degnay oo dhinaca jarka ayaanu is-taagnay oo isku gacan-qaadnay cabbaarna ku sheekaysannay. Aniga oo ka yaabban timihiisii madoobaa, sida uu iiga weynaa iyo cirrada igu taallay ayaan si kaftan ah ugu idhi:
“Oo weli timahaagu waa madow e’.” Inta uu ilko-caddeeyay oo madaxa ii salaaxay ayuu igu yidhi: “Jihaadka ayaa idin caddeeyay.”
Waxa ay ahayd markii iigu horreysay ee aan noloshayda gacan-qaado lana sheekaysto.
Intii danbe Boorame ayaan kula kulmi jiray oo muddo bilo ah uu ka socday Shirweynihii 1aad ee Guurtidu oo Cigaal loogu doortay Madaxweyne, Meey 1993kii. In badan ayaanu halkaa ku kulannay oo ku sheekaysannay, bal se aan u gudbo dhacdada aan u socday oo ah mar aanu Adis Ababa wada tagnay bishii Maarj 1993kii.
Maarj 1993kii waxa magaalada Adis-Ababa lagu qabtay wareeggii 2aad ee shirar ku suntanaa Dibuheshiisiinta Soomaaliyeed oo ay soo qabanqaabiyeen Qarammada Midoobay oo beryahaa Xoghaye Guud uu ka ahaa Butrus Qaali oo ku dhex ambaday Qalalaasaha Soomaaliyeed, raad-gadka loo maareyn la’ yahayna kaga tegay. Wareeggii 1aad waxa la qabtay bishii Jeeniweri 1993kii waxaana ka soo qayb galay Butrus Qaali iyo wefdi uu hoggaaminayay, si aan mugdi ku jirinna waxa u muuqatay sida aan qarsoodiga ahayn ee Butrus Qaali u af-duubayay qadiyadda Soomaaliyeed. Shirarkaa waxa isugu iman jiray Ururrada Siyaasadeed ee Soomaaliya, ururka SNM-na waxa uu u tegi jiray goob-jooge ahaan. Labadaa shirba waan ka qayb galay.
In yar haddii aynu dib u noqonno, 1991kii markii Somaliland lagu dhawaaqay Cigaal mar ayuu soo gaadhay Burco oo lagu shirsanaa. Isla sannadkaa, Jabuuti waxa uu kaga qayb galay laba shir oo ahaa dibuheshiisiin Soomaaliyeed oo go’aammadii ugu mudnaa ee ka soo baxay aynu ka xusi karno:
Dastuurkii 1961kii oo lagu dhaqmo,
Cali-mahdi oo loo doortay Madaxweyne ku-meel-gaadh ah,
Cigaal shirarkaa ka dib waxa uu ku noqday dalkaa Imaaraadka Carabta oo uu deggenaa, wax hawl siyaasadeed ahna kuma uu lug lahayn. Waxa kale oo jirtay in Cali-mahdi markii uu Muqdisho ku noqday uu dhisay dawlad uu Cumar Carte Qaalib ka noqday Ra’iisal-wasaare, kaas oo Golihiisii Wasiirrada ku soo daray Maxamed Xaaji Ibraahin Cigaal. Xukuumaddaa Cigaal kama uu qayb gelin.
Maxamed Xaaji Ibraahin Cigaal, waxa uu yimid Somaliland 1993kii markii uu Shirweynihii Guurtidu ka socday magaalada Boorame, halkaas oo uu mar kale ka bilaabay hawlihiisii siyaasadeed ilaa 3/5/2002da oo uu ku geeriyooday magaalada Pretoria ee dalkaa Koonfur Afrika.
Aan u soo noqdo shirkii 2aad ee Maarj 1993kii iyo Adis Ababa. Saddex wefdi ayaa Somaliland uga aqyb galay: wefdi SNM ka socday oo aan hoggaaminayay, wefdi Guurtida ka socday oo uu hoggaaminayay Sheekh Axmed Nuux, marxuum Maxamed Xaaji Ibraahin Cigaal iyo rag kalena ka mid ahaayeen oo 20 xubnood ahaa iyo wefdi ka socday ururrada samo-falka oo uu hoggaaminayay Yuusuf Xirsi Galow.
Cabdiraxmaan Axmed Cali, oo ahaa Guddoomiyaha SNM nala ma socon, aniga oo ahaa Xoghayaha Warfaafinta iyo Wasiiru-dawlaha Arrimaha Dibadda ee Somaliland ayaa markaa ahaa madaxa wefdiga SNM oo si ku-meel-gaadh ah u masilayay Guddoomiyihii SNM oo aan goobta joogin. Waxa kale oo jirtay intii aanaan Boorame ka soo ambo-bixin in Cabdiraxmaan Axmed Cali oo ahaa Guddoomiyaha SNM iyo Madaxweynaha Somaliland uu warqad rasmiya noo soo dhiibay taas oo uu ku soo qoray in uu Mudane Maxamed Xaaji Ibraahin Cigaal madax u yahay wefdiyada Somaliland ee shirka ka qayb gelaya.
Aynu ku noqonno Hotel Ghion iyo kulankii gaabnaa ee aanu Cigaal galabtaa la yeelannay. Markii uu Cigaal hadalkii ka baxay naxdin iyo khajilaad ayaa nagu habsatay. Da’dayadii iyo da’dii Cigaal ayaan isu eegay. Waayo-aragnimadiisii iyo taydii ayaanu isu eegay. Waxa aanu la yaabnay su’aashan uu na weydiiyay. Haddana is-la markiiba waa aanu garawsannay in ay daw ahayd. Markiiba aniga ayaa hadalkii qaatay:
“Adeer, laba kun oo Doollar ayay niman aanu xidid nahay sooryo iigu keeneen, ee aan wax idin ka siiyo.”
“Adeer, annaga ayaa kaa galaangal roone iska hayso waxba waayi meynnee.”
Shirkii ayaa si rasmiya loo furay. Dhaqan ahaan maalintaa furitaanka shirarku hawl ma qabtaan ee wefdiyada rasmiga ah ee dawladaha, Ururrada Goboleed, kuwa caalamiga ah iyo Ururrada Soomaaliyeed ayaa ereygooda yidhaahda. Markii ay kuwii ajnebiga ahaa hadleen, ayaa waxa dhankii wefdiga SNM fadhiyay u soo dhaqaaqay nin reer Simbaabwi ahaa oo la odhan Liyonaardo Kabuungu oo la-taliye siyaasadeed u ahaa Wakiilkii Qarammada Midoobay ee Soomaaliya. Aniga oo madaxa wefdiga ahaa ayuu igu soo dhawaaday isaga oo warqad yar sita. Isaga oo warqaddii ii dhiibay waxa uu ii raaciyay:
Intii aanan u jawaabin ayaan warqaddii eegay, waxaana ku qornaa: Maxamed Xaaji Ibraahin Cigaal, ex-Prime Minister. Liyonaardo Kabuungu waxa aan ugu jawaabay:
Goobta lagu shirayay waxa ay ahayd ‘Hall’-ka shirarka ee ECA-da ee ku yaalla Addis Ababa. Qol bilicsan oo aad looga shaqeeyay ayuu ahaa. Waxa uu ahaa wareeg ama gool badhkii oo kala sarreeya, goob-joogayaasha oo hay’adaha diblomaasiyadeed ee Addis-Ababa jooga ahaa wareegga ugu sarreeya ayay fadhiyeen. Wareegyada hoose waxa fadhiyay ergooyinka Ururrada Soomaaliyeed oo mid walba warqad magaca Ururka muujinaysaa hor taallay. SNM ahaan waxa aanu fadhinay wareeggaa hoose dacalkiisa bidix, waxaana naga yar shisheeyay oo meel naga yar sarreysa kuraasidan la qaado loo dhigay wefdigii Guurtida Somaliland oo Cigaal ku jiray.
“Aniga ayaa u jawaabaya Maxamed Abshir, anigaa u jawaabaya, nimaan aniga ahayni u jawaabi maayo.”
Qolkii shirka ayaa lagu soo noqday. Liyonaardo Kabuungu ayaa isaga oo faraxsan u kacay dhankii ay Guurtida Somaliland fadhiday. Markiiba wixii weriyayaal joogay ayaa iyaguna dhankaa u ruqaansaday. Laambado aan tiro lahayn ayaa la soo riixay oo la shiday. Makrifoonnadaa ka darnaa. Miiskii shir-guddoonka ayaa lagaga dhawaaqay in uu hadal jeedin doono Maxamed Xaaji Ibraahin Cigaal, oo Ra’iisal-wasaare Soomaaliya hore uga ahaan jiray. Sacab iyo sawaxan ayaa lala oogsaday. Cigaal ayaa hadalkii bilaabay. Markii hore af-ingiriisi ayuu cabbaar ku hadlayay, markii danbena af-Soomaali ayuu u rogtay. Aniga oo aan hadalkiisii oo dhan halkan ku soo wada qaadayn, waxa aan jeclahay in aan soo garoocdo.
Khudbaddii Cigaal maalintaa ka jeediyay shirkaa ayaan hadba in idiin kasoo garoocayaaye, bal immikana aan eegno mar uu ka hadlayay maareynta xiisaddii Soomaaliya ka taagnayd. Waxa uu yidhi:
Waa halkii uu Cigaal ka taagnaa midnamada madhan ee ragga qaarkii halhayska u noqotay. Waxa uu maalintaa Cigaal hadalkiisii ku daray in uu niman halkan fadhiya la soo qaaday hadal ah in halkan lagaga hadlo arrinta Soomaaliya oo aan ta Somaliland lagu soo darin oo ay ku gacan saydheen; iyaga oo uu ku sheegay in iyaga oo 700 oo kun oo qof Xamar ku dilay ay maanta halkan kaga doodayaan in ay aayaha Soomaaliyeed ka talinayaan.
Qas iyo wareer ayaa Qolkii shirka saaqay. Waa la isku yaac-yaacay. Fadhi iyo joog midna waa la xammili waayay. Shir-guddoonkii ayaa dhegta wax isu saar-saaray. Liyonaardo Kabuungu ayaa kursigii uu ku fadhiyay hayn waayay.
Dadka meesha fadhiyay wixii aan af-Soomaaliga qoon, waa loo tarjumayay oo samaacado ayaa dhegaha ugu jiray. Kolleyba inta aan xusuusto afafka wax lagu tarjumayay waxa ay ahaayeen: Ingiriisi, Faransiis iyo Carabi. Intaa markii uu yidhi ayaa buuqii sii batay. Liyonaardo Kabuungu ayaa u tegay Shir-guddoomiyihii oo ahaa nin diblomaasi ah oo reer Gini ah oo la odhan jiray Ambassador Lanzana Kouyate oo beddelay ninkii la odhan jiray Admiral Howe.
Liyonaardo Kabuungu ayaa si cadho leh u soo dhaqaaqay oo weriyayaashii Cigaal hor tubnaa inta uu askar soo kaxaystay qasab kaga dhaqaajiyay halkii ay taagnaayeen ee Cigaal hortiisa ahayd. laydhadhkii Cigaal ku shidnaana waa la bakhtiiyay. Laakiin makrifoonkii uu shirka kula hadlayay lagama bakhtiin. Rikoodh yar oo aan sitay oo Cigaal hor yaallay ayaan inta aan kacay makrifoon sudhay oo aan Cigaalna makrifoonkii raqabaddii shaadhka ugu xidhay. Khudbaddaa inteedii danbe cajaladdaa ayaanu ku duubannay.
Annagu waxa aanu ku soo noqonnay Qolkii lagu shirayay. Markiiba warqad martiqaad iyo ogeysiis isugu jirtay oo af-Ingiriisi ayaanu garaacnay. Dabaqii hoose oo waraaqaha lagu badin jiray ayaanu la tagnay. Markii aanu soo badsannay waxa aanu la dhex qaadnay Qolkii shirka, wefdiyadii, diblomaasiyiintii iyo weriyayaashii caalamiga ahaa iyo kuwii gudahaba. Waxa aanu qabanqaabinnay shir-jaraa’id oo Cigaal ku qabanayo Hotel Afrique galabnimada oo si faahfaahsan ugaga hadlayo Qalalaasaha Soomaaliyeed iyo sida loo maaraynayo.
Hotel Afrique ayaanu tagnay si ay ugu diyaar-garoobaan. Maamulkii Hotel-ka ayaanu arrintii is-la qaadannay. Lacag kiro ah ayaa nala weydiiyay annaguna wax caynkaas ah oo lacag ah ma aanu hayn. Waanu la gorgortannay oo wax ayay naga rideen maa daama aanu maamulka garanaynay oo beryihii aanu halgamaynay ay ka shaqayn jireen hudheelladii Raas iyo Kaara-mardha ee Diri-dhabe ee aanu macmiisha la jecel yahay u ahayn.
Maalin iyo laba ka dib ayaanu annaguna ka ambo-baxnay Addis Ababa annaga oo Qolkii shirka iyo wefdiyadiiba u qaybinnay mowqifkii SNM oo qoraal ah.
Intaasi waxa ay iga ahayd hordhac ah, Cigaal waxa uu ka qabay Qalalaasaha Soomaaliyeed ka hor intii aan loo dooran Madaxweynaha jamhuuriyadda Somaliland. Laga bilaabo maalintaa ilaa 3dii Meey 2002da oo ahayd maalintii uu geeriyooday Cigaal waxa uu aamminsanaa in:
Markii uu dhammaaday Shirweynihii Guurtida ee Somaliland ee Boorame, halkaas oo Cigaal loogu doortay Madaxweynaha Jamhuuriyadda Somaliland, ergooyinkii waxa ay u kala baxeen meelihii ay ka yimaaddeen. Cigaal waxa uu u soo ambo-baxay magaalada Hargeysa 26/5/1993kii, isaga oo habeenkaa ku dhaxay magaalada gebilay. 27/5/1993kii ayuu soo galay Hargeysa oo loogu soo dhaweeyay si la yaab leh oo aan hore loo arag. Xusuusteenna ayaan fiicnayne, haddaad aad dib u daawato cajaladihii maalintaa la duubay waxa aad la xidhiidhinaysaa sidii loo bilay aaskiisii. Maalintaa Kheyriyada ayuu dadkii isu soo baxay kala hadlay.
30/5/1993kii Cigaal waxa uu ku dhawaaqay dhowr ka mid ah xubnihii Golihiisa Wasiirrada, dhowr maalmood ka dibna waxa uu khudbad ka jeediyay Kheyriyada. Waxa aan ka mid ahaa dadkii goob-joogga ka ahaa ee dhegeysanayay. Dadkii maalintaa dhegaysanayay aad ayay uga yaraayeen dadkii soo-dhawayntiisa u soo baxay 27/5/1993kii. Sida ay ila tahay yaraanta dadkii soo baxay maalintaa waxa u sabab ahaa saluug ay dadku ka muujiyeen xubnihii Golaha Wasiirrada ee uu magacaabay. Dareen aan qarsaday ma ahayn ee Cigaal inta aan xafiiskiisa subax ugu tegay ayaan weydiiyay sida uu u macnayn karayo dad badnaantii maalintii uu Hargeysa soo galay iyo dad yaraantii maalintan danbe. Taasi waa mowduuc kale e’ aan ku soo noqdo khudbaddii uu maalintaa danbe Kheyriyada ka jeediyay. Hadalku waa uu dheeraa, waxa se wax kasoo qaad lahaa Aaragtidii Cigaal ee maalintaa ee Qalalaasaha Soomaaliyeed.
Isaga oo xilka ku cusub ayuu hadalkaa Kheyriyada ka yidhi. Markiiba dooddu waa ay bilaabantay, maalintaa iyo maalmihii xigayna waa lagu qayilayay. Cigaal laguma aqoon qof dareenkiisa qarsada. Kor iyo hoosba waa uu u odhan jiray. Cigaal waxa uu ahaa nin haladag. Sidaa ayuu midnimada u arkayay. Eedda midnimada ma uu saarayn. Midnimadu isaga waxa ay ugu xidhnayd ujeeddada laga leeyahay, sida loo hanto iyo sida hadba loogu adeegsado himilooyinka laga leeyahay. Ma ahayn nin inta uu meel fog tago ibriiq ku addima oo midnimo madhan ka sheekeeya.
Bal aynu in yar dib ugu noqonno lixdankii oo ay xummadda Midnimadu heerkeedii ugu sarreeyay taagnayd. Midnimadu beryahaa hadaaq iyo halhaysba waa ay noqotay. Xuduud ma ay lahayn. Waxa laga hadli jiray beryahaa Shanta Soomaaliyeed oo kala ahaa: Somalilan, Soomaaliya, Xeebtii Soomaaliyeed ee Faransiisku gumeysan jiray (Jabuutida maanta), N.F.D iyo Soomaalidii Galbeed (Kililka 5aad ee maanta). Midnimada Soomaaliyeed iyo Soomaali-weynba waa la odhan jiray. Waxa ay ahayd riyo la jeclaa in ay rumowdo. Waa loo hawl galay suugaan badanna waa laga tiriyay.
Iyada oo aragtidaa la wada rumeysnaa laga dhaqaaqayo, 26kii Juun ee 1960kii waxa xoroobay Somaliland, afar maalmood ka dibna oo ku beegnayd 1dii Juulay 1960kiina waxa xorowday Soomaaliya, is-la maalintaana waxa la xaqiijiyay oo la dhaqan geliyay midnimadii labadii dal ee xornimada qaatay. Sababta midnimadaa loo hirgeliyay waxa ay ahayd iyada oo la daba socday xaqiijintii Soomaali-weyn ama mideyntii shantii dal ee Soomaaliyeed. Maalmaha cidina midnimada qalad uma arkayn oo waa la aamminsanaa, mar danbe ayaa la haaraamayaa. Cigaal waxa uu ka mid ahaa hoggaamiyayaashii midnimadaa dhaqan geliyay raadintii gobolladii kalena u hawl galay.
Waxba ku noqon maayo wixii dhacay, waxa aan se jeclahay in aan halkan ku caddeeyo in aanay Midnimadu hiifka iyo haaraanka geyin ee ay canaanta lahaayeen dadkii majaro-habaabiyay ee milgaheedii lumiyay.
Soomaaliyi ha midowdo wax badan oo ka hooseeyay ma jirin, cawaaqibkeediina waa aynu aragnay. Midnimadii berigaa la raadinayay ninka maanta doon-doonayaa waa qof riyoonaya. Waxyaabo badan ayaa is-beddelay oo aanan jeclayn in aan waqti iskaga lumiyo.
Maanta hadal-hayntu waxa ay taagan tahay labadii dal ee ku mideysnaa Jamhuuriyaddii Dimuqraadiga ahayd ee Soomaaliyeed. Somaliland maa daama ay iskeed Soomaaliya ula midowday, iskeed ayay 18kii Meey 1991kii ula soo noqotay madax-bannaanideedii. Waa xaq ay leedahay oo aanay cidina ka qaadi karin.
Sidii ay wax ahaan jireen ma ahaanayaan, mana aha oo waa ay caddahay. Cigaal waxa uu u arkayay maareynta Qalalaasaha Soomaaliyeed in laba loo kala qaado: Somaliland iyo Soomaaliya. Waxa uu u arkayay Somaliland wax baa ka dhismaye, in arrinta Soomaaliya maaro loo helo, ka dibna iyaga oo laba dal oo xor ah oo jaar ah ay aayahooda ka wada tashadaan. Sidaa waa uu ku shaqeeyay oo cidna caad kama saarna.
Cigaal intii uu hayay hoggaanka Somaliland wax faro-gelin ah kuma yeelan Qalalaasaha ka taagan Soomaaliya oo kooxna gacan-saar lama lahayn, kooxna colaad gaar ah uma hayn. Soo-dhawayn iyo sooryaba waa uu u geystay intii Hargeysa ugu timid iyada oo aanay dad badani raalli ka ahayn. Cigaal kama aammusnayn masiibada Soomaaliya ka taagan e’ in badan ayuu ku dedaalay in uu ka hawl galo sidii maaro loogu heli lahaa. Dalalka aynu deriska nahay ee ku bahoobay IGAD oo arrinta Soomaaliya gacanta ku haya af iyo qoraalba waa uu ku weydiistay haddii aan loo oggolayn in Somaliland xubin ka noqoto in loo oggolaado in ay talo-bixin ku yeelato maareynta masiibada Soomaaliya ka taagan. Wax qarsoodiya ma ahayn.
Maareynta Qalalaasaha Soomaaliya ka taagan Cigaal waxa uu u arkayay in ay tahay arrin u taalla dadka Soomaaliyeed ee masiibadaasi haysato. Aragtidiisu waxa ay ahayd in xalku gudaha yaal ee aanu dibad ka iman. Waxa uu u arkayay in ay dersaan oo ay wax ka qaataan waayo-aragnimada hodanka ah ee Somaliland. Waxa uu heegan la ahaa hiil iyo hooba in ay maamulkiisa, Golayaasha Qaranka iyo guud ahaanba shacbiga Somaliland ka geysan doonaan.
Cigaal qorshihiisii ku beegnaa maareynta masiibada Soomaaliya waxa uu si cad u soo bandhigay shirkii Carta ka hor isaga oo si aan mugdi ku jirin ugu marti-qaaday Hargeysa dhinacyada Soomaaliya isku haya, oo weliba intaa raaciyay in uu diyaar u yahay ergooyin gaadhaya ilaa 500 oo qof oo inta ay hawlahooda dhammaysanayaan fadhiya, kharashkana ay Somaliland qabto. Waxa uu deeqdaa ugu daray in aanay Somaliland ku masuugi doonin waayo-aragnimadeedii ee ay ergooyinka iyo dhinacyada is-haya ku soori doonto. Qorshahaa Jabuuti ayaa hororsatay wixii ka soo baxayna waxa uu noqday dawlad-ku-sheeggii ku-meel-gaadhka ahayd ee aan hadimada mooyaane hagar-baxa lahayn ee ku ragaadday bacaadka Muqdisho.
Cigaal iyo cid kasta oo si dhab ah oo mowduuciya u arkaysay waayaha Soomaaliyeed, midnimo ajendaha ugu ma jirin ugu mana jiri karayn. Waa wax aad u fog marka la eego xaaladda maanta taagan.
Cigaal sida uu u arkayay Qalalaasaha Soomaaliyeed waxa uu markii ugu danbaysay ku xaqiijiyay dareenkii af iyo qoraalba ahaa ee uu siiyay wefdigii ugu danbeeyay ee ururka IGAD ee u socday qabanqaabada shirka Nayroobi lagu qaban doono. Cigaal waxa uu mar kale caddeeyay in aanay Somaliland qayb ka noqon doonin ee ay tahay in shirkaa lagu heshiisiiyo dhinacyada isku haya Soomaaliya ka dibna la wada hadli doono iyada oo laba dal oo deris iyo xorba ah la yahay. Sidaas ayuu ku god-galay, naxariistii Janno Alle ha siiyo e’.
Geeridu waa xaq e’ maa daama ay si kedis ah ku timid laga wada nax. Ma ahayn naxdin Somaliland ku kooban bal se Soomaali inteeda badan xadanto iyo xaradhaamoba waa ay ku yeelatay. Sohdimaha Soomaaliyeed naxdintaasi waa ay ka gudubtayoo dad iyo dalal kalena saameynteeda ayay ku yeelatay. Dhambaalladii tacsida ahaa ayaa ilaa maanta socda, gogoshaa badatay, meerisyada Quraanka ah ayaa la wareejiyay, tusbaxaa la rogay, raatubkaa la riday, af muslin iyo af-gaalaadba waa loogu duceeyay.
Xasan Bariise oo magaalada Muqdisho BBC-da uga soo warramaa waxa uu inoo noo sheegay in dadweynuhu ku soo xoomeen idaacadda iyaga oo ka naxsan geeridaa isla markaana ka tiiraanyaysan aayaha danbe oo Somaliland oo ah meesha ugu deggan. Waxa uu intaa ku daray in ay werwer iyo walaac badan ka qabeen in dagaallo hor lihi ka curtaan oo xukunka la isku laayo, bal se ay degeen markii ay maqleen Madaxweyne ayaa la doortay. Waa shacbigii ma-kasta iyo maatada ahaa ee Muqdisho. Waa dareen la yaab leh oo mudan in laga mahad-celiyo. Dareenkaa mid la mid ah ayaa ka abuurmay halkanna oo shacbiga Somaliland sidaas oo kale ayay uga xun yihiin deggenaansho-la’aanta ka taagan Soomaaliya. Intaas oo keliya ma aha e’ waxa ay diyaar u yihiin in ay walaalahood gurmad u fidiyaan tamari meel ay dhigtaba. Bal hadda aynu eegno dareennadaa Muqdisho ka dhashay qaarkood sida ay Jamhuuriya inoogu soo gudbisay. Waxa aan xiganayaa Jamhuuriya, Vol. 11, cadadkii 1796 ee ku taariikhaysnaa 14/5/2002da. Waxa ay qortay:
“Idaacaduhu waxay sameeyeen barnaamaj ay ku cabbirayaan ra’yiga dadweynaha khadka tilifoonnada laguna xiriiriyay dadka. Waxa kale oo ay sameeyeen barnaamajyo dood-wadaag ah, waxay dadku u bateen 98% in ay Cigaal ku tilmaameen nin weyn oo Somaliland oo keli ah aan ka tegine Soomaali weyn oo dhan ka tegay.”
Dareenka walaalnimo iyo baroor-diiqdu waa ay badnayd. Waxa aan jeclahay in aan halkan ku xuso dareenkii la yaabka lahaa ee Cabdillaahi Majoor oo aanay ahayn markii ugu horreysay ee uu sidaas oo kale uga hadlo Somaliland. Waxa uu ka mid ahaa odayaal la keenay Hargeysa oo burburtay markii ay garaaceen madaafiicdii iyo dayuuradihii nidaamkii bahalka ahaa ee Maxamed Siyaad Barre.
Cismaan Jaamac inta uu makrifoonkii qaatay ayaa waxa uu yidhi waxa aan ka sheekeynayaa wixii uu jeclaa Maxamed Xaaji Ibraahin Cigaal iyo nimanka qaban doona hoggaanka Somaliland. Cismaan Jaamac hore uma aqoon Cigaal, immikana ma aqoon. Hore uma aqoon oo Cismaan Jaamac tuutihii Maxamed Siyaad Barre ayaa keenay oo waxa uu ahaa nin towraddii la kowsaday. Cigaalna waa uu xidhnaa baa lagaa yidhi. Intii uu Cigaal Somaliland hoggaaminayayna Cismaan dalka cag ma soo dhigin oo London ayuu iska deggenaa. Halkee ayuu Cigaal iyo waxa uu jecel yahay ku yaqaannay? Bal adba.
Cismaan Jaamac waxa uu is-yidhi Cigaal canbaaree markii uu ceeb kale u waayayna waxa uu yidhi:” Cigaal waxa uu jeclaa in uu Villa Baydhaba ku noolaado”,
Ninkii odeyga ahaa intaas ayuu la shir yimid. Laf buu toobin ku hayaa. Cismaan ma oga in Cigaal sidii uu jeclaa loo yeelay oo iyada oo dardaarankiisii la raacayo aabbihii agtiisa, magaalada Berbera lagu aasay. Deelleydii Cabdi Iidaan, Alla ha u naxariistee, ee Awrka Dooh ma lagu yidhi ayaa waxa ku jirtay:
Bal hadda taa Cismaanba aan raacnee, maxaa ku jaban haddii uu Cigaal jeclaa Villa Baydhaba? Sow waayo kuma noolayn? Sow dal Soomaaliyeed ma aha? Miyaanu Sheekh Mukhtaar Hargeysa jeclayn? Cabdillaahi Majoor miyaanu Somaliland u damqanayn? Haddii aanu Muqdisho u damqanno ma canbaar iyo denbi baa? Waa nin iyo garaadkii, Cismaan Jaamacna daaqsin-geel wax kama arko e’ aragtidiisa ayaan gurgur-qaanso dhaafsiisnayn.
Is-weydiintu waxa ay tahay waxa uu Cismaan jecel yahay. Cismaan ma annaga ayuu midnimo nagu khuukhin karaa? Soomaaliyi waa tii midowday ee yaa gaadhsiiyay halka ay maanta kala taagan tahay? Labaatankii sannadood ee uu ka tirsanaa nidaamkii Siyaad Barre miyuu Cismaan illoobay? Maanta Cismaan ma hadal baa u bannaanaa?
Cismaan waxa aanu ka war-qabin in garaadka dadku la korayay dibudhiska iyo horumarka. Dareenka maanta Hargeysa iyo Muqdisho yaallaa ma oollin sannado ka hor. Maalintii timaaddaba dadka waayo-aragnimo hor leh ayaa u kordhaysa. Waa la soo dhaafay xilliyadii dadka la isku soofayn jiray ee la isku diri jiray.
Ugu danbaynna waxa aan Cismaan Jaamac ku leeyahay:
“Ha salaaxin naas gudhan,
Ninkii gaaggaxshaa tee”.